2021 အဆိုပါကျင်းပ ၁၂၅ နှစ်မြောက်အသွင်အပြင်နှစ်ပတ်လည် of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Founder/Acharya of ISKCON. The TOVP will be recognizing this auspicious appearance year of the Samstapak Acharya (acharya for the next 10,000 years) by welcominganew, specially designed, one-of-a-kind, life-size murti of Srila Prabhupada created by master sculptor, Locana das (ACBSP), on October 14 & 15. Like no other Prabhupada murti in the world, this murti sits ina‘worship pose’ personifying his statement, “ Mayapur သည်ငါ၏ကိုးကွယ်ရာနေရာ”. Although the murti installation has been re-scheduled for 2022, the မြင့်မြတ်သောရေ Abhisheka from the waters of 125 sacred rivers and the4Coin Abhishekas originally planned for the installation will be performed for Prabhupada's new murti at the October Welcome Ceremony. Prabhupada will remain inaroom of the TOVP to inspire and oversee the remainder of the construction while receiving daily worship until the official installation, after which he will sit gloriously on his grand Vyasasana for hundreds of years to come, eternally worshiping his Lordships and welcoming all the pilgrims who come to see Them.
PRABHUPADA လာနေပြီ။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ပါ။
“ ငါဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကိုမင်းကိုပေးခဲ့တယ်။ ယခုယူပါ၊ တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ၊ ၎င်းကိုပျော်ရွှင်ပါ။ ”
Srila Prabhupada, Mayapur, ၁၉၇၃
မှတ်ချက်: Installment payments are available for most abhisheka and seva options.
SAHASRA JAL ABHISHEKA (သန့်ရှင်းသောရေရေချိုးခြင်း) - WELCOME CEREMONY ABHISHEKA - $25 / ₹ 1,600 / £ 20
SAHASRA JAL ABHISHEKA - သန့်ရှင်းသောရေရေချိုးခြင်း
Srila Prabhupada ၏ ၁၂၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုဝင်များအားသင်နှင့်သင်၏မိသားစုဝင်များအတွက် abhisheka ကိုထောက်ပံ့ပါ။
SAHASRA KALASH TAMARA ABHISHEKA (ကြေးဝါဒင်္ဂါးပြား) - 1008 ပံ့ပိုးကူညီကန့်သတ် !! - $300 / ₹ 21,000 / £ 250
SAHASRA KALASH TAMARA ABHISHEKA - ကြေးဝါဒင်္ဂါးပြား
ကမကထ 1008 ကန့်သတ်!
SAHASRA KALASH RAUPYAKA ABHISHEKA (ငွေဒင်္ဂါးပြားရေချိုးပြီး) - 1008 ပံ့ပိုးကူညီကန့်သတ် !! - $500 / ₹35,000 / £400 (2 installments)
SAHASRA KALASH RAUPYAKA ABHISHEKA - ငွေဒင်္ဂါးပြား
SAHASRA KALASH KANAKA ABHISHEKA (ရွှေဒင်္ဂါးပြားရေချိုးခြင်း) - 108 စပွန်ဆာန့်သတ်ချက် !! - $1,000 / ₹71,000 / £800 (4 installments)
SAHASRA KALASH KANAKA ABHISHEKA - ရွှေဒင်္ဂါးပြားရေချိုးခြင်း
SAHASRA KALASH SURAJATA ABHISHEKA (ပလက်တီနမ်ဒင်္ဂါးပြား) - 108 စပွန်ဆာန့်သတ်ချက် !! - $1,600 / ₹1 Lakh / £1,300 (8 installments)
SAHASRA KALASH SURAJATA ABHISHEKA - ပလက်တီနမ်မုန့်ဖုတ်ခြင်း
$1,600 / Lakh 1 သိန်း / £ 1,300 (8 installments)
SAMSTAPAK ACHARYA SEVA - ၁၁ စပွန်ဆာကန့်သတ်ချက် !! - $10,000 / ₹7 Lakh / £8,000 (3 year installments)
$10,000 / ₹7သိန်း / £ 8,000 (3 yr. installments)
စပွန်ဆာများအနေဖြင့် Prabhupada Murti ၅ ခု "ပုံတူကူးယူထားသောပုံတူပွားခြင်း" နှင့် Sahasra Jal Abhisheka ကိုသင်၏အမည်ဖြင့်ပြီးမြောက်လိမ့်မည်။
PRABHUPADA SEVA 125 COIN အခွင့်အလမ်း
ရှားပါး ၁၂၅ နှစ်မြောက်အိန္ဒိယအစိုးရ ငွေဒင်္ဂါးပြား ၁၀၈ သာရနိုင်သည်။
Click ဒီမှာ to download the schedule.
PRABHUPADA SEVA 125 ဒင်္ဂါးပြား
အိန္ဒိယနိုင်ငံသား / နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် - ကျေးဇူးပြုပြီးဒီစာမျက်နှာကိုလှူဒါန်းပါ
နိုင်ငံတကာ - အားလုံးအခြားသူများ
စပွန်ဆာ SAHASRA JAL ABHISHEKA - ရေရေချိုးခြင်း
စပွန်ဆာ SAHASRA KALASH TAMARA ABHISHEKA - ကြေးနီဒင်္ဂါးပြားကိုရေချိုးပေးခြင်း
စပွန်ဆာ SAHASRA KALASH RAUPYAKA ABHISHEKA - ငွေဒင်္ဂါးပြားများကိုရေချိုးပေးခြင်း
စပွန်ဆာ SAHASRA KALASH KANAKA ABHISHEKA - ရွှေဒင်္ဂါးပြားများကိုရေချိုးခြင်း
စပွန်ဆာ SAHASRA KALASH SURAJATA ABHISHEKA - ပလက်တီနမ်အကြွေစေ့ရေချိုးခြင်း
စပွန်ဆာ BHAKTI CHARU MAHARAJA SEVA
စပွန်ဆာ SAMSTAPAK ACHARYA SEVA
English	 Afrikaans	 Arabic	 Armenian	 Azerbaijani	 Bengali	 Basque	 Bosnian	 Bulgarian	 Catalan	 Chinese	 Croatian	 Czech	 Danish	 Dutch	 Estonian	 Finnish	 French	 Georgian	 German	 Greek	 Gujarati	 Hebrew	 Hindi	 Indonesian	 Italian	 Japanese	 Kannada	 Khmer	 Korean	 Kurdish	 Lao	 Malay	 Marathi	 Mongolian	 Nepali	 Norwegian	 Persian	 Polish	 Portuguese (Brazil)	 Portuguese (Portugal)	 Punjabi	 Romanian	 Russian	 Serbian	 Slovak	 Slovenian	 Spanish (Spain)	 Spanish (Argentina)	 Spanish (Mexico)	 Swedish	 Tamil	 Telugu	 Thai	 Turkish	 Ukrainian	 Urdu	 Vietnamese	 Myanmar